Clamp fihenjanana aluminium
Ny clamp fihenjanana dia ampiasaina hampidirina sy hangeja ny tsipika LV-ABC miaraka amin'ny iraka tsy miandany.
Ireo clamp dia mora apetraka tsy misy fitaovana ary suiatble amin'ny toe-piainana isan-karazany.
Clamp tariby varahina
Etariby elektrika fampitaovana C endrika fantsom-by fantsom-by dia ampiasaina amin'ny fiarovana ny tselatra ny tranobe, ny fitarihana ny fifamatorana sy ny fifandraisana amin'ny asa vaventy, vita amin'ny fitaovana ambany vita amin'ny varahina ny fitondra mandeha amin'ny herinaratra, ny fanoherana ny harafesina ary ny fametrahana mety, famokarana manokana, ny mifaninana ny vidiny.
Ny GUY-LINK dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny telefaona sy herinaratra elektrika hamarana ny tady na tehina eo an-tampon'ny andry sy eo amin'ny mason'ny vatofantsika. Ho an'ny Strand fampiatoana, Guy Strand ary Wire static. Nampiasaina hamaranana ny iraky ny helodrano mpanelanelana an'habakabaka, ary amin'ny tendrony ambony sy farany ambany ry zalahy ambany.
Ho an'ny fampiharana mampisaraka amin'ny tariby overhead na tariby bandy mpanohana
• Ny splices mandeha ho azy dia natao hampiasaina
Hery lehibe (HS), mahazatra (Com), Siemens-Martin (SM), Fitaovana
(Util) sy ny kofehin'ny Bell System
ny karazan-tariby bandy rehetra voalaza etsy ambony, miampy Extra High Strength (EHS) ary
• Ny fikafika GLS mandeha ho azy rehetra dia mitazona farafahakeliny 90% -n'ny bandy
tariby nomen'ny hery manapaka
Fitaovana: Shell - Firafitra alimika mahery
Valanorano - vy mihosotra
Clamp hot-line (clamp hotline no fitaovana mivantana azo ampiasaina amin'ny fifandraisana fizarana tsipika.
Ny firaka 1-varahina sy ny firaka aliminioma dia manome tanjaka mahery, fanoherana fanoherana ary fitoviana amin'ny conductor
2-Ny sakan'ny valanoranon'ny valanoranony dia midika hoe fifandraisan'ny mpampita tsara, mampihena ny mari-pana iraisana, mikoriana mangatsiaka kely ny mpanodina ary mihena ny fitetika ny conductor mandritra ny fametrahana azy
3-Lohataona feno enta-mavesatra dia manonitra ny fikorianan'ny hatsiaka sy ny fanamafisana ny hovitrovitra avy amin'ny tselatra
4-Lohataona enta-mavesatry ny lohataona dia manonitra ny fikorianan'ny hatsiaka sy ny fanamafisana ny hovitrovitra avy amin'ny tselatra
Ny eyebolts 4-sandoka dia manome tanjaka maimaim-poana ary fanitarana fanamiana eo am-pamoahana
5-Ny fifandraisana amin'ny paompy apetraka dia manakana ny mety hitrosan'ny conducteur na ny clamp amin'ny fifandraisana bimet
Copper Aluminium Hot Line Clamp
Hot Line Clamp dia fitaovana mivantana an-tserasera mifanaraka amin'ny fizarana paompy fizarana. Ny firafitry ny firavaka vy sy ny firaka aluminium dia manome tanjaka mahery, fanoherana ny harafesina ary fitoviana amin'ny conductor.
Ny sakan'ny valanorano dia midika hoe fifandraisana amin'ny conductor tena tsara, mampihena ny mari-pana iraisana, mikoriana mangatsiaka fantsona kely ary mihena ny fitetika ny conductor mandritra ny fametrahana azy. .Ny fifandraisana amin'ny paompy apetraka dia manakana ny mety hitrosan'ny conducteur na ny clamp amin'ny fifandraisana bimetal. Ny fanandramana Cycle amin'izao fotoana izao mahomby isaky ny ANSI C119.4 dia manome toky fa ny fikafika fantsom-pifandraisana MPS dia hahatanty ny fahamaroan'ny fifandraisana napetraka tsara.
YH Composite mifono zinc oxide arrester
Amin'ny faramparan'ny 20faha taonjato, Compostite mifono zinc oxide arrester dia karazana vokatra izay ampandroson'ny taranaka vaovao ho an'ny tsena an'i Etazonia, Japon ary firenena hafa. Io no mandroso indrindra raha ampitahaina amin'ny mahazatra. Fampidirana an'ity teknolojia ity tamin'ny taona 1980, ny firenentsika dia namolavola azy ary nihaona tamin'ny fitakian'ny IEC. Ny fitambarana biolojika polimerika dia kely kokoa, maivana kokoa, mahatohitra fandotoana, porofo mipoaka ary porofo tsy ampoizina raha oharina amin'ny vera ary porselana.
Fitaovana: Stainless vy 201/304/316, Ny halavany rehetra dia azo alaina araka ny angatahinao
Coil tape vy tsy misy fangarony
Copper, mpampifandray bolt Aluminium Split
Mpifanaraka kofehy misaraka
Fitsaboana ambonin'ny tany: nopetahany takela-by / nopetahana varahina
Misy habe (faritra ampitana): 16mm2 - 240mm2
Ny varahina, konktoy Split Aluminium Split dia mety amin'ny filaharana sy ny fitaterana ny fitarihana amin'ny harato herinaratra vita amin'ny varahina. Tena nanohitra ny vaky sy ny harafesina izy io.
Copper mampifandray clamp T Type clamp
ara-nofo: 99,9% Varahina madio
Surface: Voahosotra firakotra
Izy io dia amboarina amin'ny bolt ary ampiasaina amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny fitaovana elektrika amin'ny tariby sy ny fitaovana fizarana ao anaty
Ny andian-tantara OT dia mety amin'ny fampifandraisan'ny mpampita vy (OT-3A amin'ny OT-1000A) amin'ny tariby herinaratra miaraka amin'ny fitaovana elektronika. Vita amin'ny fantsona varahina T2 izy ireo ary mihosotra amin'ny vinaingitra na asidra madio. Ny maripanan'ny fiasan'izy ireo dia -55 ℃ ka hatramin'ny 150 ℃.